DEG DEG:-Ahlusunna iyo Ciidanka AMISOM oo isku hor fadhiga Degmo ka tirsan... | Koonfur Galbeed News
HomeArimaha GudahaDEG DEG:-Ahlusunna iyo Ciidanka AMISOM oo isku hor fadhiga Degmo ka tirsan…
Wararka ka Imaanaya Degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidanka Ahlusunna Waljameeca ay ku celiyeen degmadaas Kolonyo ka tirsan Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti.
Ciidanka AMISOM ayaa doonayay inay galaan Degmada Matabaan,hayeeshee Ahlusunna ay ku diideen inay galaan halkaas.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in haatan deegaanka Janta Guundisho oo ka tirsan Gobolka Hiiraan ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhexeysa Ahlsunna iyo Ciidankii AMISOM ee kasoo baxay Baladweyne.
Sidoo kale Ahlusunna Waljameeca ayaa la tilmaamay in Ciidamo badan ay geysay Wadooyinka soo gala iyo kuwa kabaxa degmada Degmada Matabaan ee Gobalka HIiraan.
Ilaa iyo hada lama oga wax sababay in Ahlsunna ay ishor istaag ku sameeyaan Ciidamo AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti,kuwaasi oo kasoo ambabaxay Magaalada Baladweyne oo ku leeyihiin Saldhig Ciidan.
Shir muhiim ah oo lagu soo Geba-gabeeyay Gobolka Bakool